A elu-tech enterprise aku na nkewa na ọcha nke eke osisi nri
Sichuan Uniwell biotechnology co., Ltd bụ ụlọ ọrụ dị elu nke na-ahụ maka nkewa na ịdị ọcha nke ihe oriri sitere na ihe ọkụkụ sitere n'okike. Companylọ ọrụ ahụ nọ na Qionglai City, na ụlọ ọrụ mmepụta abụọ nke dị na Dongming nke mpaghara Shandong na obodo Qionglai nke Sichuan Province.
Isi mmeputa nwere uru ihe enyemaka sitere na mpaghara mpaghara
Isi mmeputa nwere uru ihe enyemaka sitere na mpaghara mpaghara. anyị nwere ọtụtụ ultrasonic na-aga n'ihu counter-ugbu a mmepụta edoghi nke na-enwe kwa afọ usoro ikike nke 6,000 tọn ngwaọrụ.
Anyị factory nwere a ọkọlọtọ ọcha omumuihe nke onwem na elu ule akụrụngwa. Anyị nwekwara usoro njikwa mma zuru oke nke gafere asambodo asambodo ISO9001.
A na-arụpụta ngwaahịa anyị n'ụzọ siri ike dịka ọkọlọtọ GMP iji hụ na ngwaahịa dị elu dị elu na usoro niile. Ngwaahịa anyị enwetawo KOSHER, HALAL, SC, FDA, Non-GMO na asambodo ikike mba ụwa ndị ọzọ.
Izute Otu Ndị Ọrụ Anyị
Anyị ụlọ ọrụ ike-elekwasị anya na-ewu nke oru otu. Anyị na-arụkọ ọrụ mgbe niile na ọtụtụ ndị ọkachamara si China na mba ndị ọzọ. Anyị emepewo usoro mmepụta dị ukwuu nke ihe karịrị ụdị ngwaahịa iri, nke gụnyere nsị soybean, wepụ Polygonum cuspidatum, wepụ tii tii, wepụ Phellodendron, na wepụ Ginkgo biloba, dịka ọmụmaatụ, mmepụta Polygonum cuspidatum kwa afọ ruru 100mt, na mmepụta kwa afọ nke soybean wepụ rutere 50mt.
Anyị Na-enye Dị Iche Iche Maka Ezi Ahụ Ike
Companylọ ọrụ anyị kwadoro iwepụta ihe ọkụkụ ma gbalịa ịkpụzi ezigbo ụlọ ọrụ. Anyị na-atụ anya ịnye ngwaahịa dị ọcha ma dị elu wepụ ngwaahịa na ahịa site na ụwa ma nwee olile anya ịnye onyinye na ahụike nke mmadụ.